Home Somali News Deg-Deg: Maxkamada Somaliland Oo Go’aamo Ka Soo Saartay Muranka Siyaasadeed Ee Xisbiyada...
Maxkmada sare ee Somaliland ayaa saaka soo saartay go’aamo lagu sharciyeeyey fasiraadii todobaadkii hore uu madaxweyne Siilaanyo u gudbiyey maxkamada ee uu maranka siyaasadeed ka dhashay.
Fadhiga maxkamada oo uu gudoominaayey gudoomiyaha maxkamada Prof Aadan Xaaji Cali ayaa laga soo saaray go’aamadan:-
In Madaxweynaha JSL uu dalbaday kaliya in tafsiir lagu sameeyo labada xili doorasho ee ay kala tilmaamayaan Go’aanka Golaha Guuritida iyo Heshiiskii Saddexda Xisbi Qaran.
In aanu Madaxweynuhu ka dalban Maxkamada fasiraad ku saabsan in Go’aanka muddo kordhinta ee Madaxwaynaha, Madaxweyne Ku Xigeenka iyo Golaha Wakiillada ee Golaha Guurtidu kordhiyas waafaqsan-yahay Dastuurka JSL iyo in kale, isla markaana aanay jirin cid durtay.
In aanu jirin Heshiis Midaysan oo saddexda Xisbi Qaran u Gudbiyeen Golaha Guurtida intii aanay samaynin Mudo Kordhinta, isla markaana Xisbayada Qaranku ay heshiiskooda, Qodobka 1aad, ku ixtiraameen Go’aankii Golaha Guurtida.
In Gudida Doorashadu cadeeyeen in aan farsamo ahaan doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne Ku Xigeenku ku qabsoomayn 26/06/2015.
In muddo xileedka 5-ta sano ee ay doorashada ku yimaaddaan Madaxweyenaha, Madaxweyne Ku Xigeenka, Golaha Wakiilada iyo muddada uu kordhiyaan Golaha Guurtidu marka ay 5-ta sano ee ay doorashada ku yimaaddeen ay dhammaato, si waafaqsan Qod. 83aad Faqradiisa 5aad iyo Qod. 42aad Faqradiisa 3aad ee Dastuurka JSL, ay leeyihiin ku dhaqan sharci oo isku mid ah
In Golayaasha Qaranku ( Fulinta iyo Xeer dajinta) ay isku mid yihiin awoodooda sharci ee muddo xileedka ay doorasho ku yimaaddaan iyo muddada loo kordhiyo aftidii Dastuurka ee 2001 horteed iyo dabadeedba. Tusaalena waxa ah in Xeer-dajintu iyaga oo ku fadhiya Mudo kordhin ay abuureen Xeerar cusub, ansixiyeen Gudiyo iyo Masuulyiiin Qaran, iwm. Dhinaca kale aftidii dastuurka ee 2001-dii horteed iyo dabadeedba waxa jiray Madaxweynayaal kala duwan oo dalka soo maray saxeexayna Xeerar iyo Mashruucyo sharci si ay u dhaqangalaan, isla markaana magacaabay Masuuliin Qaran iyo Gudiyo, waxa kale oo ay qaateen Go’aano Masiiri ah iyaga oo ku fadhiyay Mudo kordhin.
In awoodda muddo kordhinta Golayaasha Kala Duwan ee Qaranka Marka ay ka dhamaato muddo xileedka ay doorasho ku yimaaddeen uu leeyahay Golaha Guurtidu si waafaqsan Qod. 83aad Faqradiisa 5aad iyo Qod. 42aad Faqradiisa 3aad ee Dastuurka JSL.
Waxa ay Maxkamaddu laashay heshiiska Saddexda Xibsi Qaran ee KULMIYE, WADDANI IYO UCID ee ku taariikhaysan 27/05/2015 mana laha wax dhaqan-gal sharci ah maadaama Golaha Guurtidu aanay aqbalin soojeedintii Xisbiyada si wax kabadal iyo kaabid loogu sameeyo Go’aanka mudo kordhinta Golaha Guurtida ee ku taariikhaysnaa 11/05/2015.
Maxamed Cumar Geelle Xubin _________________
Cabdiqadir Axmed Maxamuud Xubin _________________
Maxamed Faarax Siciid Xubin _________________
Axmed Diiriye Qaalib Xubin _________________
Cali-Shucayb Sh. Ibraahim Nuur Xubin _________________
Cabdiraxman Jaamac Hayaan Xubin __________________
Cabdillahi Cabdi Aadan Xubin __________________
Yaxye Cali Idiris Xubin __________________
Cabdiraxman Xuseen Caynaan Xubin __________________
Cabdiraxman Xassan Nuur Xubin ___________________
Sahrah Ismaciil Cabdillahi Kaaliye Sare _________________